Sida loo iibsado kaydka XRP sanadka 2022: Tillaabo-Tallaabo Tusaha - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Sida Loo Iibsado Saamiga XRP 2022: Tillaabo-Tallaabo Hagaha
Horumarka tignoolajiyada ayaa keenay habab wanaagsan oo lagu hagaajinayo heerka nolosha. Sidoo kale, digitalization ayaa ka caawisay in la isku xiro farqiga u dhexeeya bini'aadamka iyo ilaha suurtagalka ah ee qaybaha kala duwan ee adduunka. Sidaa darteed, ereybixinta XRP waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa nidaamka dhijitaalka ah - adduunka cryptocurrency si sax ah. Ripple waa magaca shirkadda iyo shabakadda, iyo XRP waa cryptocurrency.
La sii daayay 2012, Ripple waxaa lagu dhisay borotokool il furan oo la qaybiyay wuxuuna taageeraa calaamado matalaya lacagta fiat, cryptocurrency, badeecooyinka, ama cutubyo kale oo qiimo leh sida mayl-qaadis joogto ah ama daqiiqadaha mobilada.
Sannadka 2020, ka ganacsiga-XRP waxaa hakiyay aaladaha waaweyn ee dhijitaalka ah kadib SEC waxay fayl garaysaa dacwad ka dhan ah Ripple Lab. Macaamiisha degan Maraykanka waxay wali awoodi doonaan inay dhigaaliyaan, haystaan, oo ay kala baxaan XRP. Laakiin tan waa la saxay.
XRP waxay ku dhufatay heerkeedii ugu sarreeyay maalin kasta Jan. 4, 2018, marka qiimaha hal XRP uu gaaray $ 3.84. Si kastaba ha noqotee, isbeddel hoos u dhac ah ayaa yimid ka dib markii ugu sarreysay, iyo Sebtembar 2018, XRP waxay lumisay wax ka badan 93% qiimihiisii ​​​​Janawari 2018 sare, oo ku dhufatay hoos u dhac cusub oo ah $ 0.26 Sebtembar 11, 2018.
In kasta oo ay u muuqdeen xilliyo rajo-gelin ah, haddana hoos u dhaca qiimaha ayaa sii socday illaa 2018 iyo 2019, iyo waxqabadka liidata ee sii socda waxay keentay in XRP ay gaarto heerka ugu hooseeya ee maalinlaha ah ee $0.12 Maarso 13, 2020.
Bishii Noofambar 2020, XRP waxa ay la kulantay kor u kac xagga qiimihiisu ah - maalin walba waxa ugu sarreeya $0.77 Noofambar 24, 2020. Ilaa Noofambar 2020, qiimaha XRP ayaa kor u kacay, isagoo gaadhay maalin kasta sare oo ah $1.96 Abriil 14, 2022. Isbeddellada qiimaha ee caanka ah ee baahsan ee Meey 2022 ee suuqa crypto ee khuseeya inta badan hantida dhijitaalka ah ee lagu kala beddelanayo ayaa hadda ka muuqda qiimaha XRP.
Laga bilaabo Noofambar 3, 2022 - Qiimaha hadda ee XRP waa $1.207437 halkii (XRP / USD) oo ah 68.56% oo ka hooseeya kan ugu sarreeya ee ah $3.84.
Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah mowjadda wanaagsan ee ka soo baxa adduunka crypto, dad badan ayaa xiiseynaya sida loo iibsado saamiyada XRP iyaga oo aan haysan aqoonta aasaasiga ah ee waxa ay ku saabsan tahay. Sidaa darteed, xitaa ka hor intaadan baran sida loo iibsado saamiyada XRP, waa inaad ugu yaraan leedahay aqoon aasaasi ah oo ku saabsan.
Waa maxay XRP?
Waxay u badan tahay inaad taqaan magaca Ripple. Sidaa darteed, XRP waxay ka timid Ripple. Si kale haddii loo dhigo, Ripple waa shirkadda ka dambeysa wax soo saarka XRP - lacag wax kala beddelasho, qaabaysan, oo ku socota blockchain ledgerka. XRP waxaa laga sameeyay shaybaadhka teknoolajiyada ee loo yaqaan Ripplelabs oo loogu talagalay in loogu adeego baahida warshadaha adeegyada maaliyadeed.
Intaa waxaa dheer, XRP waxaa la bilaabay sanadka 2012 oo ay farsameeyeen Jed McCaleb, Arthur Britton, iyo David Schwartz.
Maxaad ugu baahan tahay inaad iibsato saamiyada XRP?
XRP waxay caan ku tahay nidaamka isku xirka lacag bixinta dhijitaalka ah. Waxaa loo abuuray in lagu beddelo SWIFT-adeegga lacagta caalamiga ah iyo xawilaadda amniga ee ay si rasmi ah u isticmaalaan baanan badan iyo dhexdhexaadiyeyaal maaliyadeed, hanaankeedu waa mid aan dabacsanayn. Taas bedelkeeda, XRP waxay leedahay hab ka dhib yar, si loo caawiyo qaybta maaliyadda.
Ripple XRP waa mid ka mid ah 10ka lacag ee ugu weyn ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' kuwaas oo dhaqso badan oo waxtar leh marka lacagta lagu wareejinayo xadka. Waxa kale oo ay leedahay xawilaad raqiis ah oo ay iskaashi la leedahay in ka badan 300 oo shirkadood oo maaliyadeed.
Waxaa intaa dheer, Xrp waxaa loo iibsan karaa maalgashi ahaan, si la mid ah iyo sidoo kale waxaa lagu beddeli karaa cryptocurrencies kale.
Si kastaba ha ahaatee, XRP waxay u muuqataa inay samaynayso habka mid u qalma. Sidoo kale, Ripple oo ah shirkad suuq geyn dijitaal ah ayaa ku guuleysatay dacwad ka dhan ah Guddiga Securities and Exchange (SEC) oo sheegay in Shirkadda Ripple waxay ka iibinaysay calaamado aan diiwaangashanayn maalgeliyahooda.
Intaa waxaa dheer, waxaa yimid kororka masiibada Covid-19 kaas oo baabi'iyay qiimihii cryptocurrencies aad u badan. Laakiin iyada oo dhan, RippleXRP ayaa wali ku habboon awooddeeda $ 12 calaamad kasta sanadkan.
Sida loo iibsado saamiyada XRP sanadka 2022
Tallaabooyinka lagu helo saamiyada Xrp waxay u muuqan karaan kuwo adag gaar ahaan kuwa bilowga ah. Tani waxay si fudud u tahay madal wax-is-weydaarsiga kala duwan ee laga heli karo adduunka oo dhan oo ay saamaysay goobta juqraafiyeed iyo siyaasadda dawladda.
Si kastaba ha ahaatee, si loo caawiyo faham degdeg ah oo ku saabsan sida loo iibsado saamiyada XRP boostadan waxay u fududaynaysaa shan beddelaad oo waxtar leh.
1. Sida Toos Loogu Iibsado Lacagta XRP ee Ripple
Kahor intaadan isticmaalin habkan waa inaad baaritaan ku samaysaa wax-isweydaarsiga leh lammaane XRP USD ah. Ilaha la isku halayn karo waxaa ka mid ah Coinbase iyo Kraken
1 Step: Waxaad u baahan tahay inaad akoon ku samaysato sarifle leh XRP USD
2 StepDiiwaangelinta ka dib, buuxi habka lacag-bixinta ee aad door bidayso-kaarka deynta ama wareejinta bangiga.
3 StepDooro qadarka aad rabto inaad iibsato oo guji iibso
4 Step: Marka lacagtaada la xaqiijiyo, waxaad kala bixi kartaa qadaadiicdaada xrp boorsada dibadda ee aad rabto.
Faa'iidada: Madal dooggu waxay bixisaa interface dabacsan. Sido kale aad ayaa loo sugay
Khasaaro: Qiimaha sarifka lacagaha oo sarreeya iyadoo la isticmaalayo kaarka deynta ama wareejinta bangiga.
Waxay ku kooban tahay wadamada isticmaala lacagta USD
2. Sida loo iibsado saamiyada XRP Coinmama
1 Step: Waxaad u baahan tahay inaad abuurto akoon Coinmama adigoo isticmaalaya ciwaan email sax ah.
2 Step: Xaqiiji aqoonsigaaga adiga oo siinaya aqoonsiyo khuseeya oo xaqiijinaya ciwaanka emailkaaga
3 StepBilow habka iibsashada adiga oo dooranaya ciwaanka qaataha aad rabto in Coinmama u soo dirto qadaadiicdaada XRP.
4 Step: Dooro qadarka qadaadiicda XRP ee aad rabto inaad iibsato
5 StepGuji iibso Coinmama waxay si toos ah kuugu soo diri qadaadiicdaada XRP ciwaanka aad dooratay.
Faa'iido: Saamigaada XRP waxaa lagu iibsan karaa nooc kasta oo lacag ah sababtoo ah waxay leedahay labadaba US EUR doorashada.
Khasaaro: Si kastaba ha ahaatee suurtagal maaha in la iibsado qadaadiic XRP iyada oo aan la xaqiijin aqoonsiga.
3. Sida loo iibsado saamiyada XRP adoo isticmaalaya Bitcoin
Kahor intaadan bilaabin iibsashada saamiyadaada Xrp waa inaad ogaataa in wax iibsiga Xrp ee Bitcoin ay tahay nidaam laba geesood ah. Si kale haddii loo dhigo, waxay u baahan tahay inaad sameyso laba akoon oo isku xiran.
1 StepKu samee koonto beddelaad leh XRP BTC lammaane. Sarifkaan waxaa ku jira Bybit, HitBTC, CoinTiger, Bingbon, Bitwell iyo kuwo kale.
2 Step: Waa inaad akoon kale ku samaysaa Bitcoin cryptocurrency. Gaar ahaan iibsashada Bitcoin ee loo baahan yahay beddelka
3 Step: Koontadaada Bitcoin ku iibso lacagta aad rabto ee Bitcoin
Tallaabada 4: Ku beddel Bitcoin qadaadiicda XRP adoo u diraya wax-beddelashada adoo isticmaalaya XRPBTC lacag-bixinno loogu beddelayo qadaadiic/token XRP.
5 StepMarka la xaqiijiyo XRP-gaaga dib ayaa laguugu soo wareejinayaa.
6 StepMarka xigta waxaad kala bixi kartaa qadaadiicdaada XRP boorsadaada aad rabto.
Faa'iidooyinka: Xaqiijinta, kaydkaaga XRP waa la wareejiyaa isla markiiba iyada oo aan dib loo dhigin.
Khasaaro: Khidmadaha ganacsiga sare ee BTC ilaa XRP iyo habraacyadeedu waxay noqon karaan kuwo adag.
4. Sida loo iibsado XRP on Kraken
Kraken waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu iibsado XRP.
Tallaabada 1: Isku qor koonto Kraken
2 StepXaqiiji xisaabtaada Waxaad ku iibsan kartaa XRP lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' sida bitcoin ama ether, adigoo si fudud u siinaya magacaaga, taariikhda dhalashada, waddankaaga iyo lambarkaaga telefoonka. Haddii aad rabto inaad isticmaasho lacag caddaan ah, sida USD ama EUR, waxaad u baahan doontaa dukumeenti taageero dheeraad ah oo xaqiijinaya aqoonsigaaga.
3 Step: Dhigo lacag caddaan ah ama cryptocurrency. Tan waxa lagu samayn karaa iyadoo ciwaan cusub oo deebaaji ah laga dhex abuurayo akoonkaaga Kraken si aad lacag uga hesho jeebka crypto-kaaga.
4 Step: Iibso XRP. Marka lacagta caddaanka ah ay ku dhacdo akoonkaaga, waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo iibsashada XRP. Si fudud u fur bogga Dalabka Cusub, buuxi foomka dalabka oo guji IIBSO.
Faa'iidooyinka: Kraken, waxaad heli doontaa qalabka jaantuska, taageerada caalamiga ah ee 24-saacadood, noocyada kala-horumarsanaanta iyo ganacsiga leveraged.
Kraken waa adeeg sarrifka ee maaha adeeg boorsada. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ka fikirto inaad hantidaada u kala saarto boorsooyin badan.
5. Sida loo iibsado saamiyada XRP ee Binance
1 Step: Waa inaad akoon ku samaysaa Binance
2 Step: Hel ikhtiyaarka "Fiat" ee badhanka navigating
3 Step: Dooro iibso crypto marka ay soo bandhigto liiskeeda
4 Step: Ka dooro qadaadiicda XRP ee doorashada
5 StepDooro inta aad rabto inaad iibsato
Tallaabada 6: Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad dhamaystirto xaqiijinta KYC ka hor inta aan iibkaagu shaqayn
7 Step: Marka la xaqiijiyo, waxaa lagu weydiin doonaa inaad iibsato Ripple adigoo isticmaalaya kaarka deynta adoo buuxinaya xogta lagama maarmaanka ah
Tallaabada 8: Marka tan la sameeyo waxaa xisaabtaada lagu daabici doonaa qadaadiicdaada XRP ee aad iibsatay.
Faa'iidooyinka: Binance waa sarrifka ugu weyn ee Cryptocurrency ee u oggolaanaya ganacsiga iyo iibsashada isticmaalka kaararka deynta. Sidoo kale, khidmadda kabista Binance waxay khusaysaa sarrifka ku salaysan USA.
Khasaaro: Waxaa jira xad inta qadaadiic XRP ah oo aad ku iibsan karto markiiba.
Sidoo kale, khidmadaha Binance waxay khuseeyaan wadamada kale marka laga reebo USA.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu kasbado Ripple XRP oo aad barato sida loo iibsado saamiyada XRP hadda waa. Waxa kaliya ee loo baahan yahay waa inaad heshid nidaamka sarrifka la heli karo oo u furan goobtaada oo aad raacdo nidaamka loo baahan yahay. Mind you XRP coin sidoo kale waa maalgashi. Si kale haddii loo dhigo, waxay leedahay rabitaan sare oo ah inay soo saarto soo celin weyn mustaqbalka dhow.
Ma ku qanacsan tahay maqaalkan sida loo iibsado saamiyada XRP? Hadday haa tahay, ii sheeg inaad wax iibsanayso dhawaan? Yaan laga tagin.
Sida Loo Iibsado Kaydka Ripple 2022 | Hagaha Tallaabo-Tallaabo ah
Halkee laga iibsan karaa Ripple (XRP) gudaha Mareykanka
9 Xirmooyinka Heerka Ugu Fiican Sanadka 2022 | Tusaha Khubarada
Waa maxay cashuurta dakhliga maalgalinta ee saafiga ah? Dulmar iyo Sida ay u shaqeyso
Canshuurta dakhliga maalgalinta saafiga ah waa 3.8 boqolkiiba dulsaar ah boqolkiiba MAGI gaaga oo dhaafa heerar gaar ah.…
2022 Liiska Barnaamijyada 3ds Homebrew Apps oo leh Waxqabadyo Weyn
Isticmaalka 3ds homebrew apps-ka ugu fiican waxay ku xoraynaysaa caalamka waxyaabaha muhiimka ah iyo waliba degmada…
10 Qalabka Wireframe ee ugu Fiican Sanadka 2022 | Samee Sketch waqtiga dhabta ah
Sida neefsashadu ay u tahay qayb muhiim ah oo nolosha ka mid ah, sidaas oo kale ayaa siligu u qaabaynayaa naqshadaynta UX kasta…